We.com.mm - ၀က်သား ချဉ်စပ် ဟင်းရည်လုပ်စားမယ်
၀က်သား ချဉ်စပ် ဟင်းရည်လုပ်စားမယ်
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဝက်သားကို ဟင်းချက်စားရမှာ အီတဲ့ သူတွေ အတွက် အရည်သောက် ချဉ်စပ် ဟင်းလေးချက်နည်းလေးကို ပြောပြပေးပါ့မယ်နော်။ ချက်ရတာကလည်း လွယ်လွယ်လေးပါနော်။ ထိုင်းပုံသံ ချက်မယ့်အတွက် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် လေးတွေကို အသားပေးပြီး ချက်သွားမှာနော်။ ဒီတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ လုပ်နည်းလေးတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
၁. ဝက်သား ( မိမိနှစ်သက်သလောက် )
၂. ခရမ်းချဉ်သီး ( အလုံးသေး ၁၀ လုံး ကို နှစ်ခြမ်းစီ လှီးပါ )
၃. ကြက်သွန်ဖြူ ( ၅ မြွှာ )
၄. ရှောက်ရွက် ( အနည်းငယ် )
၅. ဂျင်း ( အနည်းငယ် )
၆. စပါးလင် ( နှစ်ပင် )
၇. ငရုပ်သီးအကျက်မှုန့် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း )
၈. ဆား ( အနည်းငယ် )
၉. ငံပြာရည် ( အနည်းငယ် )
၁၀. မန်ကျည်းရည် ( အနည်းငယ် )
၁၁. ရေ ( မိမိစားမယ့် ပမာဏ )
၁. အရင်ဦးဆုံး ရေကို ဆူပွက်နေအောင် တည်ထားပါ။ ထို့နောက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ စပါးလင် ဓားပြားရိုက်ထားတာတွေကို ထည့်ပါ။
၂. အနံ့မွှေးလာပြီဆိုရင် ဝက်သား နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးကို ထည့်ပါ။
၃. ပြီးသွားရင်တော့ ငံပြာရည်၊ ဆား၊ မန်ကျည်းရည် တို့ကို ထည့်ပါ။ အဖုံး ဖုံးထားပြီး ဝက်သားနူးသည်အထိ ပြုတ်ပါ။
၄. ဝက်သားတွေ နူးလာပြီဆိုရင် ငရုပ်သီးအကျက်မှုန့် ထည့်ပါ။ ပြီးရင်တော့ မိမိနှစ်သက်ရာ အရသာ ရပြီဆိုရင် စားလို့ရပါပြီနော်။ ထိုင်းပုံစံချက်တဲ့ အတွက် ဆီမပါဘူးနော်။ ဟင်းရည်အရောင်က အရည်ကြည်လေးကိုမှ ငရုပ်သီးမှုန့် ရဲရဲ နဲ့ ချဉ်စပ်လေးဆိုတော့ သောက်လို့ကောင်းမှာပါနော်။
အစားတစ်လိုင်းတို့ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ မရှိမဖြစ် Download ဆွဲထားသင့်တဲ့ app - 8 ခု
ကိုရီးယား စတိုင်လ် ကြက်ဥခေါက်မုန့် လုပ်စားကြမယ်။
Waldorf Salad (သီးစုံဒိန်ချဉ်သုပ်)
9 months ago by Psyche
ကြက်သားအစပ်ကြော် ရှူးရှူးရှဲရှဲလေး ကြော်စားကြမယ်
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကနေ အထိုက်အလျောက်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ စားသင့်တဲ့ အစားအသောက် (၅) မျိုး
ကြက်သားကြော်လို အရသာရှိစေမယ့် ပန်းဂေါ်ဖီကြော်နည်း
ချောင်းဆိုးနေချိန်မှာ လုံးဝရှောင်သင့်တဲ့ အစားအသောက် (၆) မျိုး
မိုးကြိုးပစ်နေချိန် လုံးဝ မလုပ်သင့်သော အရာများ
အမေအနားမှာ ကပ်ချွဲပြီး လိုချင်တာတွေ ပူဆာနေတဲ့ ရတနာခင်ရဲ့ သားချောလေး